Quizzes Archives - Shop
Shop > All Articles > Lifestyle > Quizzes
သင်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး ဖက်ရှင်ပုံစံက ဘာလဲ …01149
မေးခွန်းတွေဖြေပြီး မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းဂိမ်းတွေအကြောင်း လေ့လာကြည့်ရအောင်0935
သင်သာ ဂီတပညာရှင်ဆိုရင် သင်နှင့်အလိုက်ဖက်ဆုံး တူရိယာက??0891
ပျိုမေတို့အတွက် ဖူးစာရှင်ကို သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလိုက်ပါ …0946
The KaungHtet April 22, 2020 5:47 am April 22, 2020
ပျိုမေတို့အတွက် ကိုရီးယားမင်းသားလေးတွေက ဘယ်သူနဲ့ ဖူးစာဆုံနိုင်မလဲ ဆိုတာ ရှာကျိလိုက်ကြရအောင်နော် … ကိုယ့်ရဲ့ ဖူးစာဖက်ကို အမြန်ဆုံး ရှာဖွေလိုက်တော့နော် … အိမ်မှာနေပြီး အွန်လိုင်းက စျေးဝယ်လိုက်ပါ ။ Shop app ကို download …
သင်္ချာဉာဏ်စမ်းလေးတွေဖြေပြီး သင်ဘယ်လောက်စမတ်ကျလဲ …01225
The KaungHtet April 8, 2020 4:52 am April 8, 2020
အိမ်မှာနေပြီး အွန်လိုင်းက စျေးဝယ်လိုက်ပါ ။ Shop app ကို download ရယူရန် – Link 🛡 Shop.com.mm မှပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးသူများဟာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအကြံပြုထားသော ကာကွယ်မှုများကို ထိရောက်စွာလိုက်နာပြီး ဝယ်ယူသူများထံသို့ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် အိမ်မှာနေပြီး …
သင်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ …0642
The KaungHtet April 7, 2020 7:10 am April 7, 2020
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ခြင်းဆီ၏ လုပ်ပုံကိုင်ပုံမတူသလို သူတို့၏ ဝါသနာနှင့် အကျင့်ပုံစံတွေဟာလည်း ကွဲပြားခြားနားကြပါတယ် … ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့အချိန်လေးမှာ သင်ဘာတွေလုပ်နေလဲပေါ်မူတည်ပြီး သင်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အားကစားကိရိယာတွေအပြင် အခြားအားကစားကိရိယာများကို Shop.com.mm မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် ။ 🛡 Shop.com.mm …
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီအကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိလဲ ?0809
The KaungHtet April 6, 2020 7:57 am April 6, 2020
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၄ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၅၁သန်းကျော်ရှိပါသည်။ အဓိကတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများမှာ ဗမာ၊ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ ၄င်းတိုင်းရင်းသားအားလုံးကို စုပေါင်း၍ မြန်မာဟုခေါ်သည်။ မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု၏ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်သည် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်များဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ မူဆလင်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် နတ် ကိုးကွယ်မှုများလည်းရှိပါသည်။
သင့်အတွက် အလိုက်ဖက်ဆုံးအရောင်က ဘာအရောင်လဲ ?0533
The KaungHtet April 3, 2020 12:01 pm April 7, 2020